Gini bu nri nri eji agbari?
Ndụ ahụ dị ndụ, nke mkpụrụ osisi juru, veggies, meats, agwa, grains, mmiri ara ehi, ma ọ drinksụ drinksụ mmanya na nri dị mma, A na-azọpụtakwa gị njem gaa n’ụlọ ebe a na-ere nri oge ọ bụla ị na-agwụcha ihe ndị dị mkpa dịka akwa ma ọ bụ mmiri ara ehi.
A na-arụzi ezigbo nri akpọnwụ akpọnwụ akpọnwụ ebe a na USA ma bụrụ nke Thrive Life dere. ỌRR nri dị ndụ nwere ndụ shelf na-enweghị atụ 5-25 afọ, na-eme ya nnukwu nri ihe mberede ma ọ bụ ịlanarị nri. A nwere ike ịchekwa nri friza ndị a na-echekwa echekwa na kichin gị ma ọ bụ pant gị ruo ogologo oge na-enweghị nsogbu ọ bụla banyere spoilage. Ọ bụ nnukwu ụzọ iji chekwaa ego n'oge nsogbu akụ na ụba na-abawanye ma ọ bụ nlaazu ego. Iji teknụzụ friza, Ihe oriri dị mma 99% nke nri, agba, na udidi. Ngwaahịa anyị na-atọkwa ụtọ ịtụnanya! Zuru okè maka nchekwa ogologo oge na iji ụbọchị ụbọchị mgbe enwere nsogbu nri.
Nri ndị a agaghị emebi emebi ụbọchị ole na ole… ma ọ bụ karịa izu ole na ole. Ha dị mma.
Be gaghị eme mpịọkụ, degreasing, ma ọ bụ ibelata anụ ezi.
Ma enwere uto uto nke ichoghi ichota n’ebe obula ozo! Naanị rie!
Mgbe ịchọrọ ihe eji eme ihe maka otu esi eme nri ụbọchị gị, naanị họrọ ngwaahịa THRIVE ma tinye ya na ngwakọta- dị ka ị ga-eji nri ọhụrụ. Idobe IWU na kichin gị dị ka ịnwe ụlọ nke gị ma ọ bụ ụlọ nri, nri nile nke ezinụlọ gị hụrụ n'anya zuru oke. Oge ị na-echekwa site na ịpụghị na ngwa ahịa ụlọ ahịa dị n'obodo gị ga-abụ oge bara uru ị ga-eji na-eme ihe ndị na-amasị gị..
Gbalịa mee ka ThriveLife mezie nri ndị akpọnwụ akpọnwụ taa. Ha mara mma ma sie ike. Ọ ga-agbanwe ụzọ ịzụrụ, ma kwadebe nri.
Ebumnuche A Zụrụ nke NA
Anyị achọwo ụwa niile maka oge dị anya, njiri mara mma kachasi nma. Ihe oriri anyị enweghị MSG ma ahọpụtara onwe m dabere na ụkpụrụ siri ike. Site na ugbo rue ulo gi, anyị onwe anyị na-ahụ maka usoro mmepe niile nke THRIVE ka ị wee nwee udo nke obi ịmara na ị na-enweta ngwaahịa ngwaahịa kacha mma ị nwere..
N'ihi na emepụtara THRIVE maka ịhazi usoro nchịkọta ụbọchị niile, anyị mere ka ọ bụrụ ebumnuche anyị iji hụ na nri ị na-eri na-atọ ụtọ nke ukwuu! N’adịghị ka ngwaahịa ngwaahịa nchekwa ndị ọzọ na-ezo ezo ma ghara iji ya, Anwalepụtala ngwaahịa anyị oge na oge ọzọ iji nyochaa njirimara ha na ụtọ ha dị ukwuu. Na nri nri, nnukwu uto bụ ọkọlọtọ - ewezuga ya.
Ọ dị ọnụ ala na-eri ego dị ọnụ ala, ỌR foods nri dị mma iji chekwaa ego ma na-ekwe nkwa na ezinụlọ gị ga-enweta nri na ụdị nri ha kwesịrị.
A na-etinye uzommeputa dị mfe ịmere na ike ọ bụla nke MGBE ya mere ị gaghị ahapụ gị ka ọ bụrụ otu esi eji nchekwa nri ịzụrụ.. N'ihi na anyị chọrọ ka ezinụlọ gị nụ ụtọ uto na nri kachasị mma, Ezi ntụziaka anyị edepụtarala maka ngwaahịa dị egwu.
Mkpọ anyị na-achịkwa na-eme ka nri gị bụrụ nke a haziri ahazi ka ị na-ejide n'aka na nri gị nwere ezigbo nguzozi na ụdị dị iche iche. Mgbe ejiri ya na Sistem Ntughari nri anyị, A NA-A rotATAR foods nri ndị dị mma, na-ekwe nkwa na gị na ezinụlọ gị ga-enweta nri kacha ike ịnwe.
Onye na-eme bred
Nri Ahịhịa Mkpụrụ
Youmaara na Anyị Rere:
ifriizi akọrọ ọkụkọ
ifriizi ala amịrị amịrị
ifriizi anụ amịrị amịrị
Sikiree Chicken Oge
ifriizi akpọnwụ amịkpọ amịrị
ifriizi nwa agwa
ifriizi Fikiere scrambled nsen
ifriiji agwa refried agwa
ozugbo ifriizi agwa agwa
Mmiri ara ehi, Mkpụrụ osisi, na akwukwo nri
ifriizi mmanya gbara ụka
friza parmesan chiiz
monterey jaiki chiiz shredded
ifriizi yogọt nnukwu
ifriizi asak butternut skwọsh
ifriizi eyịm green eyịm
ifriizi apụl apụl
ifriizi fuji apụl
granny smith apụl
ifriizi mgbịrịgba mgbịrịgba
KAR PRRO FORBARA EGO NA-EGO NIILE
Ọ dịghị dere chọrọ
FROMB FROMR FROM N'IME RBARA MAKA EZIN DRR DR MARA EGO!
Iwu Ugbu a